Iri kacha mma igbe | Rayson
Rayson kacha mma na-ehi ụra na-ehi ụra. Companylọ ọrụ - Rayson, ebe ọ bụ na Raysson guzobere, Rayson bu n'obi ịnye ndị ahịa anyị ihe dị egwu ma nwee egwu. Anyị ehiwela nke anyị r&D Center maka imewe ngwaahịa na mmepe ngwaahịa.
N'afọ ndị gafeworonụ, Rayson na-enye ndị ahịa ngwaahịa dị elu na arụmọrụ mgbe ha ji ọrụ na-akparaghị ókè ahịa ha. Igbe kacha mma igbe kachasị mma anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara na-enwe ọtụtụ afọ nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ha na-enye ndị ahịa ọrụ dị elu karịa ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa ọhụrụ anyị kacha mma ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'anya inyere gị aka n'oge ọ bụla. Nke ngwaahịa na-arụpụta nguzogide. Ngwongwo hydrophilic nke elu nke elu ahu ka bulite iji belata mgbasa ozi.